Khabiirka Kubbada Cagta Spain & Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Ka Warbixiyay Xaaladii Ugu Danbaysay Ee Heshiiska Ay Barcelona Ku Doonayso Philippe Coutinho. – WWW.Gool24.net
Khabiirka Kubbada Cagta Spain & Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Ka Warbixiyay Xaaladii Ugu Danbaysay Ee Heshiiska Ay Barcelona Ku Doonayso Philippe Coutinho.
Mahamoud Batalaale August 10, 2017
Khabiirka kubbada cagta Spain iyo Sky Sports ee Guillem Balague ayaa faah faah ka bixiyay xaaladii ugu danbaysay ee heshiis qaaliga ah ee ay Barcelona ku doonayso kubbad sameeyaha kooxda Liverpool ee Philippe Coutinho. Guillem Balague ayaa ka farxiyay jamaahiirta Liverpool ee sida wayn uga walwalsanayd in Coutinho uu ka bixi doono kooxdooda kadib markii uu xusay in Barcelona ay hadda ka fikirayso in ay xidigo kale u dhaqaaqdo.
Guillem Balague ayaa sheegay in Liverpool ay 35 daqiiqo gudahood ku soo diiday dalabkii ugu danbeeyay ee ay Barcelona ku doonaysay saxiixa Coutinho wuxuuna dalabkani ku qiimaysnaa 85 milyan euros iyo waliba 15 milyan euros oo ku xidhnaan lahaa qaab ciyaareedka Coutinho ee Camp Nou haddii dalabkan la aqbali lahaa, waxayna Red markale muujisay in ay qaadatay go’aan ayna ku abaqli karin dalabyada Barcelona.
Khabiirka Sky Sports iyo kubbada cagta Spain ee Guillem Balague ayaan meesha ka saarin in Barcelona ay dalabkan sarre u sii qaadi karto isaga oo hoosta ka xariiqay in Barcelona ay sii ogayd in waqti badan qaadanayso qaabkii ay Liverpool ugu qancin lahayd iibka Coutinho.
Guillem Balague ayaa yidhi; “Liverpool waxay soo diiday dalabkii labaad ee Barcleona oo ahaa 85 milyan euros iyo 15 milyan euros oo dheeraad ah waxayna ku soo diiday 35 daqiiqo kadib markii ay heshay. Waxay sidoo kale qorshaysteen in ay sidoo kale diidaan dalab kale, iyagu ma doonayaan in ay iska iibiyaan”..
Guillem Balague ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Kooxda kubbada Barcelona waxay qiratay in ay soo laaban karaan laakiin sidoo kale waxay raadinayaan badalo kale. FC Barcelona waxay markasta ogayd in ay waqti dheer qaadanayso, waana saxaafada kuwa warka beenta ah bixiyay ee ma aha kooxda in la soo wareegistu ay deg deg tahay”.
Guillem Balague ayaa hadalkan kaga farxiyay jamaahiirtii Liverpool ee aamintay ololaha saxaafada Catalonia ee marar badan soo qoryay in saacado ay ka hadhsan yihiin waqtiga uu Coutinho ku biiri doono Barcelona, laakiin hadda Liverpool ayaa u muuqata mid Coutinho ku sii hayn karta Anfield.